उपनिर्वाचनका लागि पाँचथरमा थपिए एक हजार मतदाता « Mechipost.com
उपनिर्वाचनका लागि पाँचथरमा थपिए एक हजार मतदाता
प्रकाशित मिति: २५ कार्तिक २०७६, सोमबार १८:२५
आगामी मंसिर १४ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि पाँचथरमा एक हजार ५८ जना मतदाता थपिएका छन ।
पाँचथरमा एक गाँउपालिका अध्यक्ष तथा दुई वडाध्यक्ष पदमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । यहाँको फाल्गुनन्द गाँउपालिकाको अध्यक्ष, फिदिम नगरपालिका वडा नं. १ को वडाध्यक्ष र हिलिहाङ गाँउपालिका वडा नं. ७ को वडाध्यक्ष पदमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
उपनिर्वाचनका लागि फाल्गुनन्दमा ७८० जना मतदाता थपिएका छन । उपनिर्वाचनका लागि फाल्गुनन्दमा कुल १६ हजार ५७७ जना मतदाता कायम भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पाँचथरले जनाएको छ ।
यस्तै फिदिम–१ मा १४४ मा मतदाता थपिएका छन् । यहाँ कुल मतदाता संख्या तीन हजार ६७६ रहेको छ । यस्तै हिलिहाङ–७ मा १३४ मतदाता थपिएका छन । यहाँ कुल २ हजार ६०० जना मतदाता कायम भएको निमित्त जिल्ला निर्वाचन अधिकारी सरोज मेहताले जानकारी दिनुभयो ।
उपनिर्वाचन हुने तीन वटै स्थानका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त भइसकेका छन । उपनिर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रको समेत टुङ्गो लागिसकेको मेहताले जानकारी दिनुभयो । मेहताका अनुशार फाल्गुनन्द गाँउपालिकामा १३ मतदान स्थल र १० मतदान केन्द्र गरी २३ ठाँउमा मतदानको ब्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै फिदिम–१ मा एक मतदान स्थल र तीन मतदान केन्द्रको ब्यवस्था गरिनेछ भने हिलिहाङ–७ मा तीन मतदान स्थल र एक मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ ।
यहाँ तीन वटै स्थानका अध्यक्षको निधन भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । फाल्गुनन्द गाँउपालिकाका अध्यक्ष अमरकुमार नेम्वाङको २०७५ माघ २६ गते निधन भएको थियो । यस्तै फिदिम नगरपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष हर्कबहादुर मोक्तानको २०७६ साउन ६ गते निधन भएको थियो भने हिलिहाङ गाँउपालिका वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष तीर्थराज तिम्सिनाको २०७४ चैत १६ गते निधन भएको थियो । यहाँ रिक्त तीन वटै पदमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली काँग्रेसका उम्मेद्वारवीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ ।